प्रसारण बनाम कन्टोरन्ट, कुन एक .torrent को लागी राम्रो छ? | Ubunlog
प्रसारण बनाम Qtorrent, कुन एक .torrent फाईलहरू डाउनलोड गर्न उत्तम छ?
पाब्लो अपारीसियो | | सफ्टवेयर
फाईलहरू डाउनलोड गर्न, सबै भन्दा धेरै प्रयोग हुने विकल्पहरू यो हो टोरेन्ट डाउनलोडहरू। त्यहाँ धेरै प्रोग्रामहरू छन् जुन हामीलाई यस प्रकारका डाउनलोडहरू पूरा गर्न अनुमति दिन्छ तर सामान्य रूपमा लिनक्समा यति धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छैनन्। जे भए पनि, हामीसँग उपलब्ध विकल्पहरू गुणस्तरको अभावमा छैनन्, यसबाट धेरै टाढा छ, र तिनीहरूले हामीलाई .torrent फाइल क्लाइन्टमा चाहेको सबै कुरा प्रदान गर्दछन्। तर, हामी हाम्रो उबन्टुको लागि कुन टोरेन्ट ग्राहक छान्छौं? दुई उत्कृष्ट विकल्पहरू छन् प्रसारण र Qtorrent र यस लेखमा हामी तिनीहरूलाई आमने सामने राख्नेछौं।
4 प्रयोग गर्न सजिलो
6 कुन राम्रो छ: कन्टोरन्ट वा प्रसारण?
दुबै कार्यक्रमहरू उबुन्टुको पूर्वनिर्धारित भण्डारहरूमा उपलब्ध छन्, जसको अर्थ हामी सजिलैसँग र सघाउन स्थापना गर्न सक्छौंaसंग साधारण आदेश टर्मिनलबाट वा यसमा खोजी गर्नुहोस् सफ्टवेयर केन्द्र (यदि तपाईंले यसको लागि खोजी गर्नुपर्दछ भने म सिनाप्टिकबाट रुचाउँछु)। कमाण्ड उही हो, तर अनुप्रयोगको तार्किक परिवर्तनको साथ स्थापना गर्न सकिन्छ।
डिजाईनका सर्तहरूमा, इमान्दार हुनका लागि यी दुबै .torrent फाइल क्लाइन्टहरू मध्ये कुनै पनि धेरै आकर्षक देखिन्छ, तर यो धेरै लिनक्स अनुप्रयोगहरूमा तुलनात्मक रूपमा सामान्य हो। प्रसारणले हामीलाई ए धेरै धेरै साधारण विन्डो। तलको छविमा तपाईले देख्न सक्नुहुने छ, एकचोटि हामीले यसलाई खोल््यौं हामी फाइल, सम्पादन, टोरेन्ट, दृश्य र मद्दत मेनूको साथ मात्र एउटा विन्डो देख्छौं। मेनूको तल मात्र हामीसँग टोरेन्ट फाइल खोल्न विकल्प छ, सुरु, पज, मेट्नुहोस् र .torrent गुणहरू। प्रसारण छवि धेरै फरक हुँदैन यदि हामी एकता वातावरणमा छौं (एक जुन उबन्टुमा पूर्वनिर्धारित रूपमा आउँछ) वा म्याट (उबुन्टु मेट स्वाद जस्तो)।
अर्कोतर्फ, क्टोरन्ट छ दृष्टिमा अधिक विकल्पहरू। थप रूपमा, बाँया पट्टि हामी सबै .torrent, लेबलहरू र ट्र्याकरहरूको सबै राज्यहरू पनि देख्न सक्छौं। क्टोरन्टले चित्रको अलि बढी ध्यान लिएको छ, तर यो त्यस्तो कुरा हो जुन धेरै महत्त्वपूर्ण छैन, कम्तिमा मेरो दृष्टिकोणबाट।
जे होस् ट्रान्समिशन धेरै सरलीकृत देखिन्छ, यसको मतलब यो होइन कि यो सुविधाहरूको अभाव छ। दुबै ट्रान्समिशनमा र क्युरेरेन्टमा हामी गर्न सक्छौं:
खोल्नुहोस् .torrent फाइल।
बाट खोल्नुहोस् चुम्बक लिंक (दुबै लिंक टाँस्ने र कुनै वेबसाइटमा चुम्बक प्रतिमामा क्लिक गर्दै)।
.Torrent फाईलहरू सिर्जना गर्नुहोस् तिनीहरूलाई साझा गर्न।
गति सेट गर्नुहोस् सामान्य अधिकतम र न्यूनतम।
रिमोटो नियन्त्रण गर्नुहोस्.
अर्कोतर्फ, र यद्यपि यो यसको अधिक सरल छवि द्वारा आश्चर्यचकित हुन सक्छ, ट्रान्समिशनसँग छ प्रोग्रामिंग को संभावना कहिले सुरू गर्ने र कहिले डाउनलोडहरू रोक्ने, क्वोरिएन्टमा सम्भव छैन। अरु के छ त, प्रसारणले मलाई सूचित गर्दछ जब डाउनलोड समाप्त हुन्छ निर्बाध रूपमा, जुन Qtorrent गर्दैन (यसले डाउनलोड पठाउँदा ईमेल पठाउन सक्छ)।
यस अर्थमा त्यहाँ दुईवटा पठनहरू छन्। एकातिर, प्रसारण धेरै सरल प्रयोगकर्ताहरूका लागि हो जुन समय-समयमा केवल .torrent डाउनलोड गर्न चाहन्छ। ट्रान्समिशनको बारेमा राम्रो कुरा यसलाई डाउनलोड गर्नमा राखीरहेको छ र यो भुल्दैछ कि हामी यसलाई प्रयोग गर्दै छौं। थप रूपमा, यसको "क्रिप्पी" डिजाईनले यसलाई एक चपलता दिन्छ जुन मिलाउन गाह्रो छ, र यसको साथ मैले भनेको छैन कि क्टोरन्ट खराब हुँदैछ, तर त्यो प्रसारण धेरै छ धेरै हल्का.
अर्कोतर्फ, क्टोरन्ट प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रयोग गर्न सजिलो छ जसले विकल्पहरू अधिक देख्न चाहन्छन्। वास्तवमा, लगभग १००% कार्यहरूसँग एउटासँग अर्कोसँग छ, तर भिन्नता यो हो, यदि हामी परामर्श गर्न चाहन्छौं वा विभिन्न कार्यहरू गर्न चाहन्छौं भने, क्वोरन्टसँगसँग सबै थोक छ प्रसारण भन्दा।
लामो गए ती p2p प्रोग्रामहरू छन् जसमा हामीले eMule जस्तो फाइल डाउनलोड गर्न लामो लामहरू बनाए। ती सञ्जालहरूमा, त्यहाँ एक कार्यक्रम र अर्को बीच ठूलो भिन्नताहरू थिए, तर त्यो त्यस्तो हो जुन टोरेन्ट नेटवर्कमा हुँदैन, जबसम्म हामीले वास्तवमा खराब ग्राहक पाउँदैनौं। गति, Qtorrent र प्रसारणको बारेमा तिनीहरू बाँधिएका छन् र, यदि हामी उनीहरूलाई युटोरन्टसँग तुलना गर्ने हो भने, उदाहरणका लागि, म यो पनि भन्न सक्छु कि तिनीहरू सबै यत्तिको चाँडो हुन्छन्। तीन केसहरूमा गति बीजमा निर्भर गर्दछ र हामीसँग राउटरमा एप्लिकेसन पोर्टहरू खुला छ कि छैन भन्नेमा यो सामान्यतया आवश्यक पर्दैन। मैले लामो समयदेखि पोर्टहरू खोलेको छैन र मलाई कुनै गतिको समस्या छैन।
कुन राम्रो छ: कन्टोरन्ट वा प्रसारण?
जाराबे डे पालोले भने जस्तै, «यो तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ«। म जस्तो प्रयोगकर्ताको लागि जो एकै पटक मात्र .torrent चाहान्छ र यसलाई जटिल बनाउन चाहँदैन, विकल्प छनौट ट्रान्समिशन हुनुपर्छ। म म्याग्नेट लिंकमा क्लिक गर्छु र बिर्सन्छु। जब डाउनलोड समाप्त हुन्छ, यसले मलाई सूचना सहित सचेत गर्दछ र यो नै हो। मलाई थाहा छ सबै विकल्पहरू कहाँ छन्, यद्यपि यो पहिचान गर्नुपर्दछ कि तिनीहरू क्युरेन्ट्रेन्ट भन्दा बढी लुकेका छन्।
यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं केहि अलि बढी माग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ र तपाईंले धेरै थोरै (न्यूनतम) प्रदर्शन गर्न त्याग गर्नुहुन्न, तपाईंको छनोट क्वोरिएन्ट हुनुपर्छ। तपाईंसँग दृष्टिमा अधिक विकल्पहरू र कम क्लिकहरू टाढा छन्। अन्तत: तपाई कन्टोरन्टमा धेरै ट्रान्समिशनमा भन्दा धेरै .torrent फाईलहरू प्रबन्ध गर्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » सफ्टवेयर » प्रसारण बनाम Qtorrent, कुन एक .torrent फाईलहरू डाउनलोड गर्न उत्तम छ?
रायटो यागामी भन्यो
मैले प्रसारण गर्न कोसिस गरेको छैन तर यसले फाईलहरू र आईसोस डाउनलोड गर्दछ। शानदार तरिका
रायटो याग्मीलाई जवाफ दिनुहोस्
र qb ले स्ट्रिमि allowsलाई अनुमति दिन्छ
पेपलाई जवाफ दिनुहोस्
क्रिस्टियन टाबरेस विलानुएवा भन्यो
क्रिस्टियन ट्याबरेस विलानुवेवालाई जवाफ दिनुहोस्
Aldo Felip Arévalo Rodríguez भन्यो
सरल र धेरै प्रभावी प्रसारण
Aldo Felip Arévalo Rodríguez लाई जवाफ दिनुहोस्
सुपरमारियो फ्युएन्टेस भन्यो
म जलप्रलय प्रयोग गर्दछु
सुपरमारीओ Fuentes लाई जवाफ दिनुहोस्
जुआन माता गोन्जालेज प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
कुनै संकोच बिना प्रसारण
जुआन माता गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
जोस मरियम हेरेरा मेन्डेज भन्यो
2 को दशक
जोस मरियम हेरेरा मेन्डेजलाई जवाफ दिनुहोस्
एरिक रासन भन्यो
प्रसारणले मलाई कहिले असफल गरेको छैन
एरिक रासनलाई जवाफ दिनुहोस्
इभान पिनेडा भन्यो
Ivan Pineda लाई जवाफ दिनुहोस्
सर्जियो एस भन्यो
जबदेखि म उबन्टु प्रयोग गरिरहेको छु, म ट्रान्समिशनको बानीमा छु र मलाई यो साँच्चिकै मन पर्छ। यो म कहिले असफल भएन र तपाईलाई चाहिने सबै पनि छ।
सर्जियो एस लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो केसमा मैले धेरै भिडियोहरू डाउनलोड गरें, मैले लामो समयदेखि ट्रान्समिशनको प्रयोग गरेको छैन किनकि यसमा एक विकल्प छैन वा हराइरहेको छ यदि तपाईसँग क्युबिटोरन्ट छ, जुन तपाईले डाउनलोड गरिरहनु भएको फाइलमा दायाँ क्लिकबाट पहुँच गरिएको थियो। र यसलाई डाउनलोड क्रमबद्ध क्रम भनिन्छ, र अर्को डाउनलोड पहिलो र अन्तिम भागहरू पहिले, यसले मलाई डाउनलोड समाप्त हुनु अघि भिडियो हेर्न सुरू गर्न मद्दत गर्दछ, कि त एसएमप्लेयर वा VLC सँग, जुन मेरो क्युबिटोरन्टको लागि फरक हो र मेरो आलोचना मात्र हो। यो विकल्प सबै भिडियोहरूको लागि पूर्वनिर्धारित हुनुपर्दछ।
गिइलर्मोलाई जवाफ दिनुहोस्
मानुएल पेरेज फिगुएरो भन्यो
म्यानुएल पेरेज फिगुएरोलाई जवाफ दिनुहोस्
रोड्रिगो हेरेडिया भन्यो
रोड्रिगो हेरेडियालाई जवाफ दिनुहोस्
मिगुएल गुटेरेज भन्यो
मिगुएल गुटेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मार्सेलो मार्टिनेज भन्यो
लिनक्समा म ट्रान्समिशन र विन्डोज कन्टोरन्ट प्रयोग गर्छु
मार्सेलो मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
रोबर्टो लोपेज भन्यो
Qbittorrent जति सक्दो मैले यसलाई खोलेँ र यसले राम्रो वेग लिन्छ, ट्रान्समिशनले मलाई धेरै समय लिन्छ।
रोबर्टो लोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
पाब्लो निकोलस लor्गोर्टेज भन्यो
प्रसारणले मलाई "पन्जा जस्तो" फिट गर्छ
पाब्लो निकोलस लor्गोर्टेजलाई जवाफ दिनुहोस्
जेम्स एचएच रोड्रिगेज भन्यो
बनाउँछ5महिना
Ubuntu मा प्रसारण म कसरी कष्टप्रद ध्वनि सूचना हटाउन सक्छु जब डाउनलोड समाप्त हुन्छ?
James HH Rodriguez लाई जवाफ दिनुहोस्
लिनक्स मिन्ट १.17.3..XNUMX (गुलाबी) अब डाउनलोडका लागि उपलब्ध छ
उबुन्टु सुरू गरेको बखत कसरी हार्ड ड्राइभहरू माउन्ट गर्ने